झ्याप्प’झ्याप्प बत्ती जाने समस्याको समाधान गर्दै कुलमान घिसिङ । – Nepal Online Khabar
झ्याप्प’झ्याप्प बत्ती जाने समस्याको समाधान गर्दै कुलमान घिसिङ ।
भाद्र ७, २०७८ सोमबार 388
काठमाडौं : लो’डसेडिङको अन्त्य भए पनि बिना जानकारी बिजुली काटिने समस्या अझै पनि हट्न सकेको छैन । किन बिजुली काटियो भन्नेबारे नेपाल वि’द्युत् प्राधिकरणले सामान्य सूचनासमेत दिन छाडेको छ ।
यस्तै, नयाँ बत्ती जडानका लागि मिटरसमेत पाउन छाडियो । नो लाइट नम्बरमा फोन गर्दा कर्मचारीको व्यवहार रुखो हुन थाल्यो । एकातिर फोन नउठ्ने, उठीहाले पनि कुनै जानकारी नदिने अवस्था देखिन थाल्यो ।
पछिल्लो एक वर्षमा आम उपभोक्ताले यस्ता भोग्दै आएका छन् । गुनासो गर्ने निकायले गुनासो सुन्दैन, आवश्यक परेको बेलामा बिना जानकारी बिजुली काटिन्छ ।
वि’द्युत् आपूर्तिलाई नियमित, भरपर्दो, गुणस्तरीय बनाउन, चु’हावट नियन्त्रण गर्न, वि’द्युतीकरण गर्न, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र आफ्नो सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन पहल थालिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विनाजानकारी झ्याप्पझ्याप्प बत्ती जाने गरेको, नयाँ वत्ति जडानका लागि मिटर पाउन छोडेको, नो लाइटमा फोन गर्दा फोन नउठाउनेजस्ता गुनासा आउन थालेपछि यस्ता समस्या समाधान गरी सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन प्राधिकरण व्यवस्थापनले आवश्यक प्रयत्न गरेको छ ।
प्राधिकरणले वि’द्युत् आपूर्तिलाई नियमित, भरपर्दो तथा गुणस्तरीय र सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो एवं सहज बनाउने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सहरी सौन्दर्यलाई बृद्धि गर्न ‘उज्यालो र सफा सहर अभियान’ चलाउने घो’षणा गरेको प्राधिकरणले उज्यालो सहर अभियानअन्तर्गत नगरपालिकाहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा मुख्य सडक, ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदाहरू, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत तथा पर्यटकीय
स्थानहरूमा सजावटयुक्त आधुनिक बक्ती (स्मार्ट लाइट) जडान गर्ने
प्रक्रिया सुरु गर्न मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै सफाइ अभियानअन्तर्गत मुख्य तथा सहायक सडकहरूमा रहेका प्रयोगविहीन अनावश्यक वि’द्युतीय पोल तथा तारहरू हटाउने, तारहरूलाई भूमिगत गर्नेलगायत काम अगाडि बढाउन पनि प्राधिकरणको निर्देशन छ ।
बैठकमा वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपयकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले चुहावट नियन्त्रण, वि’द्युतीकरण, सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिनुभयो । उहाँले रुग्ण बनेका आयोजनाहरूको ठेक्का तोड्न र कुनै ठेकेदारबाट काम हुँदैन जस्तो लागेमा ठेक्का त
Prevफेरि बढ्यो पेट्रोल र एलपी ग्यासको मूल्य !
Nextखाली पेटमा तुलसी पानीको फाइदा !
जनकपुरका अधिकांश स्थान डुबानमा
एमसीसीको वि’पक्षमा मतदान गर्ने नेकपा (एस) को निर्णय !